06/06/2018 - Page 2 sur 4 -
Ankerana : Zaza rano 07 volana nisy nanary tao anaty lakandrano
Zazalahy kely manodidina ny fito volana an-kibo no hita faty sy nisy nanary teny amin’ny tetezana teny Ankerana omaly tokony ho tamin’ny 03 ora tolakandro. Araka ny angom-baovao, dia mpanasa lamba teny an-toerana no nahatsikaritra …Tohiny
Ady amin’ny fampiasana plastika : Natomboka tamin’ny mpianatry ny oniversite ny fanentanana
Nifantoka tanteraka tamin’ny ady atao amin’ny fampiasana ny plastika ny lohahevitra nobanjinin’ny minisiteran’ny Tontolo Iainana, ny Haivoary, ary ny Ala, nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an’ny tontolo iainana izay notanterahina omaly. Natomboka teny …Tohiny
DREN, CISCO, ZAP : Nanamafy ny fijoroany hanohizana ny fampianarana
Nitondra ny teny fanamafisana mahakasika ny fijoroany hanohizana ny andraikitra amin’ny fampianarana ireo maro an’isa avy ao DREN, sy CISCO ary ny ZAP; tamin’ny alalan’ny fanambarana ny fahavononany hanohy ny fampianarana sy hanatanteraka ny asany …Tohiny
Firaisana tsikombakomba amin’ny dahalo : Mpamily maro amin’ny RN7 nidoboka am-ponja
Lalam-pirenena isan’ny mampatahotra fa ihany koa malaza ratsy amin’ny fanafihan-dahalo ny Rn7, eo anelanelan’ Ambohimasoa sy Ihosy. Saika isan’andro no misy fanakanan-dalana ataon’ireo dahalo. Tsy vitany manakana fotsiny ihany anefa izany fa miaro fandrobana sy …Tohiny